"Ala Muxuu Ciyaartoy Yahay, Waxaad Moodaa Inuu Beerta Gurigiisa Ku Dhex Ciyaarayo" - Robin Van Persie Oo Amaanta Ka Haysan Waayay Xalay Xiddig Man United Ah - Gool24.Net
“Ala Muxuu Ciyaartoy Yahay, Waxaad Moodaa Inuu Beerta Gurigiisa Ku Dhex Ciyaarayo” – Robin Van Persie Oo Amaanta Ka Haysan Waayay Xalay Xiddig Man United Ah
Weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United ee Robin Van Persie ayaa amaan kala dul dhacay xiddiga hadda booskaas uga masuulka ah United ee Anthony Martial kaddib guushii adkayd ee ay xalay kooxdaasi ka gaadhan Copenhagen.
Man United ayaa guul 1-0 ah ka gaadhay kooxda ree Denmark kulan adag oo 120 daqiiqo la ciyaaray iyagoo wareega afar dhammaadka iskaga xaadiriyay rigoore uu shabaqa dhex dhigay Bruno Fernandes.
Red Devils ayaa marka laga yimaado inay hal gool ku adkaadeen ciyaarta guud ahaan bandhig wanaagsan soo sameeyay iyadoo uu goolhayihii Copenhagen ahaa ninka lafta dhuunta gashay ku noqday ee u diiday inay si sahlan ku guuleystaan.
Goolhayaha Copenhagen ee Johnsson ayaa 13 badbaadino oo uu toddoba kamid ah xerada darbadaha xerada ganaaxa dhexdeeda lagaga soo laagay qabtay.
Haddaba, mid kamida xiddigaha kulankaas markale wacdaraha kasoo dhigay ayaa ahaa Anthony Martial oo halis badan ku abuuray daafaca Copenhagen, 24 sano jirka ree France ayaa ahaa xiddigii lagu galay rigoorihii kulanka go’aamiyay.
Van Persie oo kulanka kaddib amaan kala dul-dhacay Martial ayaa ku sifeeyay mid heer caalami ah oo u muuqda sida inuu ku dhex ciyaarayo beerta gurigiisa marka uu garoonka ku jiro.
“Ala muxuu ciyaartoy yahay, sidaas ayay farxad u tahay in la daawado, waxa uu u ciyaarayaa sidiiyoo uu xalqad tababar ku samaynayo beerta gurigiisa”
“Waxaan filayaa inuu Martial yahay heer caalami sababtoo ah isagu waxkasta wuu leeyahay, isagu wax ayuu ku siin karaa, wuu caawin karaa, goysmo ayuu sameeyaa, waa mid dheereeya laakiin sidoo kale waxa uu ka warqab wanaagsan u leeyahay waxa hareerihiisa ka dhacaya”